Umkhiqizi Ohamba phambili We-3D Wallpaper kanye neFektri | Yilibao
Okungeyona into enobuthi ne-eco-friendly: Izitika zodonga ze-XPE zenziwe ngogwebu lwe-XPE, okuyinto ephephile, enobungani bemvelo futhi engeyona enobuthi.
3d odongeni iphepha
1. Okungenabuthi futhi okunobungane: Izitika zodonga ze-XPE zenziwe ngogwebu lwe-XPE, okuyinto ephephile, enobungani bemvelo futhi engeyona enobuthi.
2. Ikhwalithi eqinile: idizayini eqiniwe iyanamathela kakhulu, ithambile futhi ayizweli.
3. Izinhlobonhlobo zezitayela: i-3D design ntathu, ukuthungwa okucacile, imibala ecebile nehlukahlukene, ukusika mahhala.
4. Kulula ukuyihlanza: ayinamanzi futhi ayilwi nokungcoliswa, sula ihlanzekile.
Iphephadonga luhlobo lwezinto zokuhlobisa zangaphakathi ezisetshenziselwa ukunamathisela izindonga, ezisetshenziswa kakhulu ekuhlobiseni kwangaphakathi kwezindlu, amahhovisi, amahhotela, amahhotela, njll. Okokusebenza akukhawulelwanga ephepheni, kepha kufaka nezinye izinto. Ngoba inezici zemibala ehlukahlukene, amaphethini acebile, isitayela sikanokusho, ukuphepha nokuvikelwa kwemvelo, ukwakhiwa okulula, nezintengo ezingabizi, ezingenakuqhathaniswa nezinye izinto eziningi zokuhlobisa ngaphakathi.
Imvamisa i-bleached yamapulangwe enziwe ngamakhemikhali isetshenziselwa ukukhiqiza iphepha eliyisisekelo, bese licutshungulwa ngezinqubo ezahlukahlukene, ezinjengokumboza, ukuphrinta, ukufaka embossing noma ukumboza indawo, futhi ekugcineni kusikwe futhi kuhlanganiswe ngaphambi kokushiya imboni. Inamandla athile, ukuqina, ukubukeka okuhle nokumelana okuhle kwamanzi.
● Impilo yesevisi ende: Sebenzisa iphepha lodonga ngobuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe, okokusebenza kwalo kungcono, futhi impilo yensizakalo izoba yinde.
● Ijubane lokwakha liyashesha futhi lihlanzekile: kunzima ukupenda udonga futhi lizoshiya amabala athile, futhi kunzima ukulisusa, kepha lapho iphepha lodonga selinamathiselwe, uma i-glue ichitheka ngengozi ebhodini lokushibilika noma kuwindi lefasitela, imvamisa sisebenzisa iduku elimanzi noma isipanji. Ingahlanzwa ngokushesha.
Izitayela ezicebile: khetha isithombe sakho sangemuva osithandayo bese udala noma yimuphi umphumela owufunayo.
● Isikhala samanani amakhulu: intengo ingahlangabezana nezidingo zamazinga ahlukene.
PE isikhwama, ibhokisi noma Big isikhwama nokwelukiweyo.
Langaphambilini I-XPE Puzzle Mat
Olandelayo: I-EPE Puzzle Mat
Iphephadonga le-Foam le-3d
I-Xpe Foam Material Wallpaper
Iphephadonga le-Xpe Foam